Kenya oo safaaraddeeda dib uga fureysa Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya oo safaaraddeeda dib uga fureysa Soomaaliya
Dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaadday in ay fureyso safaaraddeeda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho
NAIROBI, Kenya - Dowladda Kenya ayaa sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan Safaaradeeda dib uga fureyso magaalada Muqdisho, iyadoo ku marti-qaadday Safiirka Soomaaliya ee Kenya inuu dib ugu soo laabto Nairobi, dibna u bilaabo shaqadiisa.
Warkan oo goor dhaw kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in ay muhiim tahay in la muujiyo xiriirka labada dal soo laabashadiisa, iyadoo labada safaaradoodba si dhaqso leh loo furi doono toddobaadyada soo aaddan.
Kenya ayaa warkan soo saartay kaddib markii horraantii toddobaadkan ay labada dowladood ku dhawaaqeen xiriirka labada dal in la hagaajiyay, waxaana uu ku soo beegmayaa xilli loo diyaar garoobayo doorashadii madaxtinimada dalka Soomaaliya iyo tii baarlamanka oo la filayo in dhawaan ay billaabato.
Kenya iyo Soomaaliya ayaa safaradahooda kala rartay, iyadoo dhowr jeer xiriirka labada dal uu xumaaday, waxaana intii uu joogay xafiiska madaxweyne Farmaajo uu noqday xiriirka labada dal mid aan wanaagsaneen.
Halkan hoose ka akhriso warka kasoo baxay wasaaradda arro,aja dibadda Kenya: